I-IDRA-21 powder (22503-72-6) hplc =98% | AASraw I-Nootropics powder
/ iimveliso / I-Nootropics powder / IDRA-21 powder (22503-72-6)
Akukho kalo SKU: 22503-72-6. Udidi: I-Nootropics powder
I-AASraw ihamba kunye nekhono lokuvelisa kwigram ukuya kulawulo lwe-IDRA-21 powder (22503-72-6), phantsi kolawulo lweCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
IDRA-21 powder ividiyo
I-IDRA-21 ebomvu beeNdawo eziphambili
igama: IDRA-21 powder
Ifomula yeMolekyuli: C8H9ClN2O2S
Ubunzima Ezinto: 232.69
I-IDRA-21 ebomvu ephucukileyo ekuphuculeni umsebenzi wengqondo kunye nokunyusa okunye
Ukusetyenziswa kwe-IDRA-21 emfutshane
Okwangoku, kukho izilingo kuphela kwizilwanyana, ngokukodwa kwiinkawu kunye neerati, zombini ezo zibonise ukuphuculwa kwengqondo engenakucingekiyo nemiphumo emibi engabonakaliyo. Isistim seenkwenkwe sasikwi-3 okanye i-5.6 mg / kg, eyayilawulwa ngolwazi ukuba i-IDRA-21 powder yayingu-10X inamandla kunamanye ama-nootropiki.
Nangona okwangoku akukho zifundo ezishicilelweyo zeklinikhi ezijolise kumlinganiselo wokusetyenziswa komntu, kukho iindawo ezinokubukezwa kwamanye ama-intanethi ezibonisa amava amahle xa i-IDRA-21 ipowusi eluhlaza ithathwa ngomlomo. Isiphakamiso sokukhuthaza ukuxilongwa kwezinto ku-5-25mg.
Ezi zikhokelo zifuneka ziqwalaselwe ngokucokisekileyo, ngokukodwa njengoko iziphumo ze-IDRA-21 powder zingadlulela kwiiyure ze-48. Ukuba umthamo we-5 mg uthathwa, kungekho nto ichaphazelekayo ngoko, nawaphi na amanani athile athatyathweyo kufuneka alumke ngokunikezelwa ukuba kunokubakho ukuchitha ixesha lokubangela iingxaki.
Isilumkiso kwi-IDRA-21 powder
Xa kuthelekiswa namanye ama-nootropics aqhelekileyo, ipayipi ye-IDRA-21 ayinanto kwimiphumo emibi. Ngokusisiseko, yenza oko kuhlose ukukwenza, ngokuxhasa ukuvuka, nokukhulisa amandla okufunda kwaye akenzi nto enye. Oku kuxhaswa ngakumbi ngeengxelo ezisekelwe kuphando lophando lwama-rhesus ezindala kunye nekhono lokufunda elilinganisiweyo.
Kufuneka kuphawulwe kwiziphumo ukuba iimpembelelo ze-IDRA-21 ebomvu ekhulayo zifike kwiiyure ze-48. Iziphumo zophando ziye zabonisa ukuba i-IDRA-21 powder yi-10X enamandla ngakumbi ukuba i-Aniracetam, isisigxina esikhankanywe eYurophu esinempahla efana ne-INDA-21. Kwakhona, iziphumo ze-IDRA-21 powder zingadlulela kwiintsuku ze-3 xa kuthelekiswa ne-2-3 ngeyure ye-Aniracetam.
Iingxelo ze-Anecdotal ngabantu abaye basebenzisa i-IDRA-21 powder eluhlaza zibandakanya iimvakalelo ezincinci kunye neentloko Le ndlela yokuphendula ingabangelwa ukusetyenziswa kwe-IDRA-21 powder ngabantu abaye bafumana umlinganiselo ongentla okanye ukwandiswa kwemisebenzi ye-neural ngoko ngokwenene kufuneka usebenzise i-IDRA-21 powder.
Kucetyiswa ukuba abantu abasandul unembali yokubetha okanye unomngcipheko wokubetha akufanele ukusebenzisa i-IDRA-21 powder eluhlaza. Unxibelelwano lwee-Neural eziye zonakaliswa okanye zithe zonakaliswa zingonakaliswa ngokukhawuleza ngokusetyenziswa kwanoma yiyiphi i-supplementary or compounds ezakhayo okanye ezikhuthaza umsebenzi we-transmitter.
Okwangoku, akukho zikhokelo ezithile malunga nokusetyenziswa kwe-IDRA-21 powder xa usebenzisa imithi enqunyiwe okanye kwimpembelelo yayo kwiimeko zonyango. Kodwa inkxalabo iye yaphakanyiswa ekusebenziseni i-nootropics ngamaxesha afanayo nokusebenzisa i-anti-depressants njengoko inhlanganisela inokuvelisa imeko ebalulekileyo
I-IDRA-21 powder yinxalenye entsha ye-nootropic. Isebenza njenge-ampakine yezidakamizwa ezikhuthazayo kwaye ngoku iphandwa malunga nemiphumo yayo ekuphuculeni imemori, ukuphuculwa kwengqondo, ukuvuselela nokuguqula ukulahlekelwa kwengqondo. Kusenokwenzeka ukuba yaveliswa kwi-1994 okanye i-1995 njengoluvavanyo lokuqala lweekliniki kunye namaxwebhu okuphanda aphandwe ngabanye avela kwiincwadi kwi-1995.
(1) IDRA-21 powder Indlela yokuSebenza
I-IDRA yeklasi yee-compounds ezibizwa ngokuba ngama-ampakines. Ama-Ampakines ayimodemu ye-allosteric ye-AMPA receptors engqondweni. Ama-receptors ase-AMPA anesixanduva sokutshintshwa kwe-synaptic ngokukhawuleza kwaye zibandakanyeka kwi-plastiki ye-synaptic kunye nefuthe elide elide.
Njenge-Ampakine, i-IDRA-21 powder eluhlaza isebenza ngokumodareyitha i-AMPA receptors kwingqondo. Ngokucacileyo i-IDRA-21 powder ibophezela kwisayithi ye-allosteric ye-receptor ye-AMPA kwaye yenze i-modulation efanelekileyo, ngezinye izihlandlo ibizwa ngokuba yi-activist allosteric.
Uphando lokuqala kwi-IDRA-21 powder oluhlaza lucebisa ukuba luyakuthintela ukufunyanwa kwemvume ye-AMPA kwaye ke ukwandise iimpendulo ze-synaptic kunye nememori yokuxhasa nokufunda.
(2) Isebenza njani?
I-IDRA-21 ipowuni eluhlaza yikhampani ye-ampakine kunye ne-ampakines isebenzise i-receptors kwingqondo yakho ebizwa ngokuba yi-AMPA receptors. Ezi zamukeli zijongene nokwandisa isantya soqhagamshelwano phakathi kwee-brain neurons, kunye nokukhuthaza ukufunda nokukhumbula.
I-IDRA-21 powder ibophelela kwi-receptors engqondweni elawula ingqwalasela, ukuphaphama, nokuphendula. Kwakhona kwandisa imiphumo yezinye zeengqondo ze-brain, ikakhulukazi i-glutamate. I-Glutamate yenye ye-2 i-neurotransmitters ebaluleke kakhulu efunyenwe kwingqondo kwaye inoxanduva lokuqiqa ngokukhawuleza, ukugxininisa ukwandiswa, ingqwalasela engcono kunye nezakhono eziphuculweyo.
(3) I-IDRA-21 ye-powder Benefits
• Ukwandiswa kokuqonda (Ukulinganisa imisebenzi yesampula eyenziwa yiRhesus Monkeys)
• Ukwandiswa komsebenzi ochanekileyo
• Ukwandiswa kwiMemori Yesikhashana esifutshane
• Iimpembelelo zonyango ezenzekayo kwi-Schizophrenia
• Iimpembelelo zokwelapha zengqondo kwintlungu
• Izibonelelo ezijongene nokulahlekelwa kwengqiqo kwe-Alprazolam
I-IDRA-21 Powder Raw
I-IDRA-21 yePowder Marketing
Indlela yokuthenga i-IDRA-21 powder esuka kwi-AASraw